Hafu Penta Prism, Penta Prism, Njiva Prism Mugadziri muChina
Tsanangudzo:Hafu Penta Prism,Penta Prisms,Njiva Prism,Optics Prism,,
 HomeProductsOptical PrismMamwe maPrism
Mamwe maPrism (Total 6 Products)
Zvigadzirwa zve Mamwe maPrism , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Hafu Penta Prism , Penta Prisms vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Njiva Prism R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Hunhu hwechidziro chedenga ndechekuti danda rakakamurwa nepakati, nehafu yedanda ichirova kutanga kumeso kumwe kumeso kumwe kumeso, apo ichidzosera imwe hafu yedanda. Naizvozvo, denga remba rinogona kushandiswa chete neine chinhambwe kune ndege...
Realpoo Optics inogona kugadzira yakakosha prism acchading kune yako yekudhirowa kana kukumbira Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhiimendi Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20 kana zvirinani Angle Kushivirira:...
Iyo hafu-penta prism inogona kukanganisa mwenje 45 ° pasina kutendeuka kana kutenderera. Inogona kushandiswa kutendeuka kana kupatsanura mwenje. Inoshandiswa zvakanyanya muzvirongwa zvekufungidzira uye masisitimu ekufungidzira. Magadzirirwo:...
Nekuda kwepamusoro polish leven uye yakanaka tembiricha kugadzikana, iyo jewel bearings inowanzo shandiswa mumhando dzakasiyana siyana dzekushandisa kwemaindasitiri iyo yaida yakanyanya kukweshera pamwe nekuenderana mukuita uye hupenyu hwakareba....
Njiva prism imhando yemufananidzo rotator. Mushure mekunge mwenje wapfuura nepakati, mufananidzo unodzoserwa ne180 °. Pamusoro pezvo, kana chishongo chikatenderedzwa nezvechiso chayo chekutenderedza, kona yekutenderera yemufananidzo yakapetwa kaviri...
Iyo penta prism ndeimwe yevanotungamira eiyo yakatarwa kona (90 °) yedanda. Iine zvinangwa zviviri: imwe ndeyekuti zvisinei kuti kona yechiitiko panzvimbo yekutanga chii, mwenje wakaburitswa unoshandura mwenje wechiitiko kune imwe kona (90 °);...
China Mamwe maPrism Vatengi
Chishongedzo chemaziso chiri pachena chinoonekera chine mapapiro, akakwenenzverwa ane mwenje.
Reflective prism inoshandiswa kuratidza mwenje, kuitira kupuruzira, kutendeuka, kutenderera, kutsausa kana kuisa danda remwenje. Ivo anowanzo shandiswa kumisa iyo mufananidzo mumabinoculars kana imwechete-lens reflex kamera - pasina maprismesi iyo mufananidzo unenge wakatsikitsira pasi kumushandisi. Mazhinji ma prism anofungidzira anoshandisa kuratidzwa kwemukati kuzere kwekuratidzira kwakanyanya.
Iwo akajairika ekuratidzira prism ndeaya:
Amici padenga prism
Pentaprism uye padenga pentaprism
Matanda anoparadzanisa matanda
Mamwe marimu anoratidza anoshandiswa kupatsanura danda kuita maviri kana anopfuura matanda.
Beam mahwanda kuutio
Hafu Penta Prism Penta Prisms Njiva Prism Optics Prism Penta Prism